Abaalmarinta Nobel Prize ee nabada oo la siiyey dhakhtar Denis iyo Nadia Murad… – Hagaag.com
Abaalmarinta Nobel Prize ee nabada oo la siiyey dhakhtar Denis iyo Nadia Murad…
Posted on 5 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Abaalmarinta Nobel Prize-ka ee nabada ayaa loo gartay u dhaqdhaqaaqayaasha joojinta xadgudubka galmada “Anti sexual violence activists”oo ay ka soo kala jeedaan dalalka Congo iyo Iraq oo kala ah dhakhter Denis Mukwege iyo Nadia Murad.
Nadia Murad oo u ololeeysa xuquuqda aadanaha ee dadka Yezidi-ga ah ayaa ka badbaaday Adoonsi xaga Galmada ah ee kula kacay ururka Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq ÏSIS”, halka Mukwege uu yahay dhakhtar cudurada haweenka oo daaweeya dhibanayaasha faraxumeynta galmada ee dalka Jamhuuriyada Dimoqoraadiga ee Congo.
Labada qof ee ku guuleystay abaalmarintan ayaa waxay leedahay kaalin muhim ah oo lagu muujinayo isla markaana lagu dhiirigelinayo la dagaalanka dembiyada dagaal iyo in ay difaacaan dhibanayaasha weerarka galmada inta lagu jiro xiliyada dagaalka.
Nadia ayaa markhaati ka aheyd dembiyada lagula kacay ee adoonsiga galmo iyada iyo haween kale, halka Mukwege uu caawinay dadka lagula kacay dembiyada dabeecad galmo lahaa ee waqtiga dagaalka, wuxuu waqtiga noloshiisii qeyb ka mid ah oo weyn ku qaatay caawinaada dadka dhibanayaasha ah ee wadankiisa, isaga oo abuuray isbitaal lagu daweeyey kumanaan ka mid ah dhibanayaasha.
Nadia Murad ayaa sheegtay in la dilay hooyadeed iyo lix walaalaheed iyo ilmo adeeradeed qaar ka mid ah.
Abaalmarintan ayaa qiimaheedu yahay 9 milyan oo lacagta Swedish kroon-ka oo u dhiganta ($ 1 milyan) waxaana lagu abaalmarin doonaa munaasabadda ka dhici doonto bisha December 10da magaalada Oslo.